Kube nenqwaba yocwaningo ngokuziphatha kwabavakashi bewebhu nokuthi bafunda kanjani futhi badlulise ama-athikili namakhasi kusiphequluli sewebhu. Indlela ejwayelekile yezivakashi zewebhu ukufunda idatha noma izihloko ku iziqubu kunokuba ufunde i-athikili phezulu phansi. Ngokwami, ngizabalazile ngibhala ngale ndlela, kepha ngiyaqhubeka nokuzama. Ukwehlukanisa izingcezu zokuqukethwe ngezihloko ezingafakwa isibindi, ezinemibala ehlukile, noma ezinkudlwana ngosayizi kuzovumela izivakashi zakho ukuskena okuqukethwe kwakho ngokushesha. Ngokwengeziwe, ukwahlukanisa izigaba zakho kunika amandla abasebenzisi ukuskena ngokushesha, kwesinye isikhathi kweqa ukusuka ekuvuleni umusho kuya kumusho wokuvula kunokufunda yonke imininingwane phakathi.
Nginecala njenganoma ngubani ngokungacabangi, kepha ngizosebenza kanzima kukho. Kufanele futhi, ... kube iwebhusayithi yakho noma ibhulogi yakho, izivakashi zizogcina okuningi mayelana nesayithi lakho kanye nama-athikili alo kunokuba unganqamuki. Lapho bekhumbula okuningi, bazobuyela kokunye!